Hoggaamiyaha Guud Ee Al Shabaab Abu Cubeyda Oo Laga Helay Cudurka Kansarka Iyo Xaaladdiisa Caafimaad Oo Liidata | Hangool News
June 14, 2018 - Written by Hangool News 1
Hangoolnews:- Warbixin uu daabacay Wargeyska The Star ayaa lagu sheegay in ay liidato xaaladda caafimaad ee hoggaamiyaha guud ee Al-shabaab Abu Cubeyda oo la xaqiijiyey in uu la ildaran yahay cudurka kansarka oo caloosha ka asiibay.
6-dii bilood ee la soo dhaafay ayaa la sheegay in xaaladda hoggaamiyaha Al-shabaab ay ka soo daraysay, waxaana wararku ay tilmaamayaan in cudurka kansarka uu ku sii fidayo qeybaha kala duwan ee guddaha calooshiisa, sida uu X
Xaqiijiyey Wargeyska The Star oo baaritaan ku sameeyey wararka la xidhiidha xaaladda Abuu Cubeyda.
Abuu Cubeyda ayaa hadda u muuqda in uu yahay mid ka rajo dhigay in uu sii hayo xilka ugu sarreeya Al-shabaab oo uu qabtay sannadkii 2014-kii kadib markii duqeyn lagu dilay hoggaamiyihii ka horeeyey ee Al-shabaab Ahmed Cabdi Godane.
Ku-xigeenadda hoggaamiyaha Al-shabaab Abuu Cubeyda ayaa la wareegey howlihiisa si ay isku hayahaani qeybaha kala duwan ee ururka ilaa inta laga xaqiijinayo in uu geeriyooday.
Warbixintaan uu soo saaray Wareyska the Star ayaa lagu sheegay in xubnaha gollaha shuurada Al-shabaab ay labo u kala Jabeen kadib markii ay sii xumaatay xaaladda caafimaad Abuu Cubeyda, kuwaasi oo qaarkood ay dalbadeen in xilka laga qaado islamarkaana la soo magacaabo hoggaamiyaha cusub ee badelaya Cubeyda.
Dhanka kale Wargeyska The Star ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa xusay inay xubnaha Al-shabaab ee ka soo jeeday qabaa’ilka Hawiye ay hoggaamiye u magacowdeen Hassan Fiidow oo galaya booskii Abuu Cubeyda halka xubnaha ka soo jeeda Qabaa’ilka Daarood ay dalbadeen in waqtigaaban talo lagu soo Magacaabo, hoggaamiye Cusub oo la wareegay Hogaanka Al-shabaab, taalbooyinkaas oo sii kala fogeeyey labada garab ee Al-shabaab.
Abuu Cubeyda ayaa lagu tilmaamayaa in uu yahay nin aan Mayal adkeyn,sida hoggaamiyaashii Al-shabaab ee ka horeeyey, taasi oo ka dhigan in uu yahay shaqsigii ugu hoggaanka xumaa ee soo mara Al-shabaab.
Wixii ka danbeeyey xasuuqii 14-kii Oktoobar sanadkii 2017, ka dhacay Isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho waxaa soo baxayey warar sheegaya in uu xanuunsan yahay hoggaamiyaha Al-shabaab Abuu Cubeyda, waxaana soo Ifbaxay khilaaf soo kala dhexgalay golaha Shuurada Al-shabaab.